Shiinaha LH ugxanta tijaabada marinka warshad iyo alaableyda | Kibir
Hal Tijaabo LH Ovulation Test waa tijaabo isdabajoog ah oo tallaal ah oo loogu talagalay go'aaminta tayada tayada ee hormoonka Luteinizing hormone (hLH) ee kaadida si loo saadaaliyo waqtiga ugxantu soo baxdo.
Hal Tijaabo LH Ovulation Test waa mid tayo leh, oo labalaab ah antibody sandwich immunoassay oo lagu go'aaminayo hormoonka bini'aadamka Luteinizing (hLH) ee kaadida. Xuubka ayaa horay loogu sii daayay anti-α hLH ee gobolka khadka tijaabada iyo ariga anti-mouse IgG polyclonal antibody ee gobolka khadka xakamaynta. Inta lagu jiro hawsha baaritaanka, kaadida bukaanka waxaa loo oggol yahay inay ku falceliso conjugate midab leh (jiir anti-β hLH monoclonal antibody-colloid gold conjugate) kaas oo horay loogu qalajiyey aaladda baaritaanka. Isku darku wuxuu markaa kor ugu socdaa xuubka chromatographically ficil dillaacsan. Qeybta xakamaynta waxay u adeegtaa tixraac ahaan midabka midabkiisa qiyaastii 25mIU / ml LH.
Hal duub oo tijaabada ugxanta ah ee LH.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Qalabka baaritaanka wuxuu ka kooban yahay dahab dahaarka leh oo dahaaran 1.5mg / ml antibody antibody
jiir 1mg / ml jiir anti α LH antibody iyo 4mg / ml jiir anti β LH antibody.
1 Tijaabo Hal Talaabo ah LH Ovulation Test
1.One Hal Talaabo LH ugxanta Baadhitaanka kiish bireed
Magaca Badeecada Tijaabo Hal Tijaabo Uur-ku-Bixinta Kaadi
Baakadaha 1/2/5/25/50 / 100pcs / sanduuq
CADDAYNTA TAARIIKHDA IMTIXAANKA
Sidaan ognahay, heerka ugu sareeya ee urursiga LH ayaa imaan doona ugxanta kahor .Ururka ugxansidaha ugxansidaha wuxuu xiriir dhow laleeyahay heerka ugu sareeya ee sii deynta LH xilliga caadada. LH peak wuxuu saadaaliyay ugxanta soo socota 24-48 saacadood. Sidaa darteed, baaritaanka muuqaalka kore ee LH ee xilliga caadada ayaa xaqiijin kara waqtiga ugu wanaagsan ee bacriminta.
Marka si loo go'aamiyo goorta la bilaabayo baaritaanka, waa inaad marka hore ogaataa dhererka wareeggaaga caadada.
Ogow: haddii aadan hubin dhererka wareeggaaga, waxaad bilaabi kartaa inaad sameyso baaritaankaan 11 maalmood ka dib caadadaada ugu horreysa ， mid maalin kasta oo aad joojiso illaa iyo inta laga ogaanayo kororka LH
Hore: Tijaabinta Uurjiifka LH Dhexdhexaad
Xiga: Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee Dengue
1) Ka saar furka tijaabada boorsada xaashida
3). Akhri natiijada 10 daqiiqo.
HA TURJUMIN NATIIJADA 10 DAQIIQO KA DIB.
Tilmaam ： Kaliya hal xariiq oo casaan ah ayaa ka muuqda aagga koontaroolka (C) ama labada khad ee aagga koontaroolka iyo gobolka imtixaanka ayaa muuqda, laakiin khadka tijaabada (T) ee hadda jira ayaa ka fudud kan khadka koontaroolka (C) ee midab xoojinta .Tani waxay muujineysaa inaan la ogaan kororka LH waana inaad sii wadataa baaritaanka maalinlaha ah.
Positive: Laba khad oo casaan ah oo kala duwan ayaa soo muuqda, mid wuxuu ku yaalaa gobolka tijaabada (T), kan kalena wuxuu ku yaalaa gobolka kontoroolka (C), xariiqda tijaabada (T) way ka siman tahay ama ka mugdi badan tahay xariiqda kontoroolka (C) ee midabka xoogiisa. Markaa waxaad u badan tahay inaad ugxanta soo gasho 24-48 saac ee soo socda. Hadana haddii aad rabto inaad uur yeelato, waqtiga ugu fiican ee galmo la sameeyo waa 24 saac kadib laakiin waa ka hor 48 saac.
Aan ansax ahayn: Haddii aanu jirin khadad midabkiisu casaan-guduud yahay oo muuqda labadaba gobolka imtixaanka (T) iyo gobolka xakamaynta (C), ama uu jiro khad casaan iyo guduud midabkiisu ku yaal gobolka imtixaanka (T), laakiin ma jiro khad ka jira gobolka xakamaynta ( C), imtixaanku ansax maaha. Waxaa lagugula talinayaa in baaritaanka lagu celiyo kiiskan.